Shabakada Wareegga Dheeraadka ah ee Tusaalaha Lagu Calaamadeeyay
Baadhayaashu waxay u baahanyihiin inay ku soo maraan bogagga internetka oo ay sheegaan macluumaadka dhabta ah ee ay doonayaan inay ka soo saaraan
Isku duubista Macluumaadka Kala Duwan ee Webka
Markasta oo bogga internetka uu ka furmo bog cusub, dadka isticmaala waa inay soo saaraan qaar ka mid ah. Kadib sameynta qorshe, dadka isticmaala waxay leeyihiin horumarinta xulashada. Waxay yihiin waxyaabaha ku jira bogga bartilmaameedka kaas oo ku jira xog gaar ah. Isticmaalayaasha waxay ku dari karaan, badali karaan ama tirtiri karaan doorashooyinka iyaga oo raacaya guddiga. Isticmaalayaasha waxay isticmaali karaan qalabkan xoqitaanka si loo ururiyo noocyo kala duwan oo xog ah, sida content, jadwalka, sawirrada, lambarada taleefannada, qiimaha iyo wixii intaa ka badan. Ka dib marka la uruuriyo macluumaadka ay u baahan yihiin, dadka isticmaala waxay nuqul ka noqon karaan natiijooyinka sida TSV oo ku dhajinaya Clipboard oo ku xafidaya faylasha, ama dhoofinta natiijooyinka Google Docs sida Excel Spreadsheet.
Navigalayo Heer Sare ah
Adigoo isticmaalaya qalabkan saarista, raadiyeyaasha webka waxay ku dhex socon karaan qaybaha kala duwan iyo qaybaha kala duwan waxayna si sahlan u doortaan qoraalka xiriirka. Tusaale ahaan, waxay dooran karaan laba xulasho oo isku xiran: hal mid ah qaybaha ugu muhiimsan iyo kan kale ee qaybaha hoose. Tani waxay suurtogal u tahay inaad ku socoto bogagga internetka ee kala duwan oo soo saaro URL-yada.
Sidee loo xakameyn karaa bogsiinta
Maanta dukaamada iyo dukaamada badan ayaa leh qaybo badan oo ka mid ah boggooda internetka. Isticmaalayaasha waxay u baahan yihiin inay go'aamiyaan nooca ay doonayaan inay isticmaalaan. Koox kastaa waxay leedahay liistada alaabooyinka ay la socdaan xiriirinta bogagga. Waxaa intaa dheer, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin in ay xasuustaan ​​in ay jiraan bogag qaar ka mid ah oo kaliya laga heli karo bogagga istiraatiijiga ah oo aan ka ahayn qaybo gaar ah. Waxay kaliya oo ay tahay in ay bilaabaan iyaga oo abuuraya khariidad goobta (qorshe) oo ay bilaabaan soo saarida alaabta. Si ay sidaas u sameeyaan, waa inay sameeyaan Lifaaqa Liis kale oo loogu talagalay xulashada Xiriirada Pagination. Isticmaalayaasha waxay u baahan yihiin in ay xasuusnaato in marka sawir-qaadaha bogga uu furo qayb gaar ah, waxay kaliya ka soo ururin kartaa sheybaarka boggan gaarka ah. Kadibna, waxay isticmaali kartaa xiriiro kala duwan oo suurtogal ah. Xidhiidhyadani waxay ogaan karaan macluumaad dheeraad ah oo la xidhiidha, iyo sidoo kale xiriiro badan oo loogu talagalay dadka isticmaala.
Qalabkan raadisku wuxuu leeyahay qaabab aad u wanaagsan, waxana uu ka caawin karaa raadiyaha internetka inuu soo ururiyo natiijooyinka ay rabaan, si ay u falanqeeyaan mar danbe. Waa qalab sahlan oo aan u baahnayn codeyn iyo dadka isticmaala uma baahna inay yeeshaan xirfadaha barnaamijka kombuyuutarka sare. Waa shabakadda ugu fiican ee bilaashka ah ee shabakada ah ee kumbuyuutarka ee kuwa aan barnaamijka doonaynin in ay ka soo saaraan xogta laga helo websaydka iyaga oo aan shaqaalayn xirfadlaha webka. Waa inay kaliya isticmaalaan browserka Google Chrome si loogu rakibo Source .